Ukukhulelwa - ingenye ngezikhathi ezinhle kakhulu ekuphileni sowesifazane. Igqoka inhliziyo yomntwana futhi ilungele ukuze afeze injongo yayo eliphakeme - ukuze ube umama. Phakathi nenkathi yokukhulelwa, owesifazane eshintsha ngaphakathi nangaphandle. Ezinye amantombazane kulesi "ezithakazelisayo" isikhathi aqale ukuqaphela okubi kakhulu imizwelo yabo, kukhona isifiso sobulili kakhudlwana, futhi, mhlawumbe, abanye bangase babe orgasm okokuqala. Kodwa-ke ngeshwa, umbono weningi sekuyisikhathi eside yena wanithwesa Taboo ku ubulili kule nkathi - kukholakala ukuthi ubulili ngesikhathi sokukhulelwa kungaba ingozi unina esizayo futhi ingane yakhe.
Ezwa onke okukhulelwa kwakhe, abesifazane kukhona sexier. Zikhona izincazelo eziningana. Okokuqala nje, ingozi eyinhloko inyamalala (ikakhulukazi olufanele aphakathi kwabesifazane abangashadile) - abakhulelwe bengahlosile, lapho awusenakuqhubeka cabanga ezinsukwini ezibucayi kanye nokuvimbela ukuthi ungenza izinguquko ubumfihlo. Ungakwazi phumula futhi ujabule, njengoba besho, e force okugcwele. Amadoda, wazi ukuthi umlingani wabo othandekayo egxile ngokuphelele nakho sezinzwa, hhayi ukunakekela kuqala nge-ovulation izibalo abe abakhululiwe ngaphezulu. Yiqiniso, lokhu "indlela" Bobabili unesithakazelo.
Sex nge muntu othandekayo kuyoba isibili amahle ngoba owesifazane ivuliwe (kodwa mhlawumbe ngasese) uyaziqhenya maduze wengane yakhe. Ngenxa yalokho, kuba ngisho nangokwengeziwe emehlweni othandekayo wakhe, njengoba kwabonisa ukuthi owesifazane sokujabula, yize noma engekho enhle ngempela, edonsela bese idonsa.
Zonke emizweni zesifazane, ngokobulili ikakhulukazi, babe inkanuko kakhulu futhi ezimibalabala. Physiologists ukuchaza nesanda ukuzwa esikhathini sokukhulelwa ukunwetshwa sangasese kanye kwesibeletho, ukwandisa ukugeleza kwegazi endaweni okhalo, okwandisa clitoris. Kuyaziwa ukuthi abanye besifazane abakwazi ukuze orgasm okokuqala ngesikhathi sokukhulelwa kuphela, kuyilapho abanye ifinyelela iqophelo imizwa yabo. Ngenxa yalokho, ngokuphambene nombono othandwa iningi, futhi odokotela bathi ubulili ngesikhathi sokukhulelwa - ezifana evamile njengakuqala.
Ngaphezu kwazo zonke lezi zinzuzo nochwepheshe ukuhlukanisa imiphumela bokuphila ubulili yomzimba wowesifazane. Orgasm, okuyinto olutholwa abesifazane, ewusizo kakhulu, futhi ngaphezu kwakho konke, ngoba umntwana. Phakathi ngocansi kwandisa kwegazi umzanyana, liphinde kunikeza ingane nge mpilo nezakhi. Ukwesaba okubangela ukulinyazwa ingane, ngokusho kodokotela, kukhona nehaba. Kid ungaphakathi isikhala avaliwe evikelwe ngokuphepha amniotic bubble lesizalo kwemisipha odongeni plug lwamafinyila okuyinto occludes wesibeletho. By endleleni, le Kufinyeta Rhythmic kwesibeletho ukulungiselela umzimba ukuzalwa oluzayo, bekhumbula imihelo sokuzalwa. Futhi-ke, wonke Umbuso kufanele batibandzakanye ezimpilweni zabo kuphela ezimweni lapho ubulili ngesikhathi sokukhulelwa - isifiso mutual bobabili kwabashadile, futhi lokhu azikho imingcele okuhlotshaniswa impilo umama okhulelwe.
Wonke umuntu wesifazane ufuna ukugwema nanoma yiziphi izinkinga ngesikhathi sokukhulelwa izinyanga eziyisishiyagalolunye sekudlule ku ejabulile, ebheke ebeletha ekhaya kunokuba egunjini lasesibhedlela. Ngakho-ke, kufanele ngaso sonke isikhathi ukulalela iseluleko odokotela. Kufanele ngilale namuntu uma udokotela esixwayisa usongo ukukhipha izisu , noma uma esikhathini esidlule kwakukhona kwesisu, okungukuthi yisisu. Ubulili ngasekuqaleni izigaba inkathi yokukhulelwa kungaba yingozi ngoba Kufinyeta lesizalo ngesikhathi orgasm kungabangela ukungamukeli kabi igxilile phezu kwezingange zawo umbungu. Ngakho-ke kungase ukuphumula ngokobulili Kunconywa senyanga yokuqala nowesifazane.
Ukwesaba okunjalo ekhona ezigabeni kamuva. Isibonelo, uma isikhathi kwezidingo asikafiki, kodwa kukhona ukuvuza-amniotic fluid, noma ocucuzayo kwanoma isikhwehlela ipulaki, noma yimuphi omunye ukukhathazeka kodokotela ngalokhu, ukuthi ubulili ngasekupheleni ekukhulelweni ingaphinda contraindicated.
Misa kumsebenzi wocansi uzakwethu kuyadingeka futhi uma iveza izimpawu isifo ezingase zidlulele ucansi, njengoba ngesikhathi sokukhulelwa abesifazane basengozini enkulu kuya zokuthelela ngokwabo izifo ezifanayo ezithathelwana ngobulili, kungaba adalule ingozi engathi sína ukungenwa zempilo womntwana. Lezi zincomo ziyasebenza nakulabo ezimweni lapho wesibeletho uya isikhwehlela ipulaki (ngokuyisisekelo iqala izinsuku ezimbalwa ngaphambi kokubeletha), esebenza njengesikhali isithiyo okuvikela Ukungena lesizalo izifo.
Akunconyelwe ubulili ngesikhathi sokukhulelwa uma owesifazane enezinwele ukunamathislwa eliphansi previa placenta noma wakhe, futhi uma bekhulelwe kwande.
Lapho contraindications ubulili wayengekho, kodwa inqubo sobuhlobo bobulili zitholakala osenyameni lwamafinyila noma ukopha (ngisho ebuthakathaka), kufanele ngokushesha kudokotela.
Amalungiselelo kokugcina: ukwenza uhlu lwezinto esibhedlela
Amanga futhi iqiniso noma ukuqala izimpi kwabesifazane abakhulelwe
Ezinkantolo emabhange emalini ebolekwe: Litigation
Uyikhohliwe iphasiwedi yakho ye-Windows 7. Yini okufanele ngiyenze?
Kolirovka izihlahla entwasahlobo, ekwindla, ihlobo (izithombe)
Ifilimu ethi "Igazi ngebisi": abalingisi bakhuthaza umbukeli ukuthi umuntu kufanele abe nguye
Izicathulo Wamathambo kwabesifazane, kungani uzigqoka?
Izibuyekezo ze-Arbidol, Ukusebenza kahle, ama-Analogues
Isiqubulo Knight sika. Knights medieval